कतिले गर्छन्, भेट्टाएको पर्स फिर्ता ?
पाम बेलुक असार ७, २०७६
सामान्यतया ठानिन्छ, कसैले पैसा भएको पर्स भेटेमा फिर्ता गर्ने सम्भावना निकै न्यून हुन्छ ।विश्वका चर्चित अर्थशास्त्री तथा सामान्य मानिसले पनि मानवीय गुणका आधारमा यस्तै अनुमान गर्छन् ।...
राजन मुकारुङ असार ७, २०७६
‘बौद्धिकता मात्र आलोचनात्मक व्यवहार, नयाँ व्याख्या या प्रश्नाकूलता होइन, यो त यी सबैको अतिरक्ति उचित–अनुचित, नैतिक–अनैतिक, कल्याणकारी वा हानिकारी, मूल्यवान वा अमूल्यवान आदिको गहिराइबाट गरिने...
रमेश के.सी. असार ७, २०७६
रमेश के.सी.हिजो सत्य लागेका कुरा आज कम सत्य र असत्य लाग्न थालेको छ । सत्य पनि युगसापेक्ष हुँदोरहेछ । जीवन, जगत र प्रकृतिका ‘फेनोमेना’ बुझ्ने ज्ञान पनि...
विमल निभा असार ७, २०७६
वास्तवमा कुरो के हो भने आलोपालो कुर्सीमा बस्ने सहमति भएको थियो । यो गोप्य प्रकारको सहमति थियो । त्यसैले फ्याट्टै खुला भयो । यदि गोप्यको साटो खुला सहमति...
नबोल्नेको सिमी पनि बिक्दैन
सम्पादकीय असार ६, २०७६
बोल्नेको पिठो बिक्छ, बोलेन भने कर्णालीको सिमी पनि बिक्दैन । कर्णालीको सिमी आफैंमा ब्रान्डजत्तिकै हो । माग पनि छ । बजारमा यो सिमीको दाललाई अढाई सय रुपैयाँसम्म पर्छ,...